किन नेपालीहरु भारतलाई राम्रो आँखाले हेर्दैनन ?::mirmireonline.com
किन नेपालीहरु भारतलाई राम्रो आँखाले हेर्दैनन ?
सामरिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिले पनि नेपाल भारतको सबै भन्दा प्रभावशाली छिमेकी राष्ट्र हो । जस्तो कि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले तीन दिने नेपालको राजकीय भ्रमण ( कार्तिक १७ देखि १९ ) का क्रममा भनेका थिए कि नेपाल र भारतको जस्तो सम्बन्ध भएको मुलुक विस्वमा काही पनि छैन । यसको दुवै अर्थ छ , दुवै खाले प्रभावहरु छन् र विष्लेषणका आधारहरु छन् ।
नेपाल र भारतको सम्बन्ध आत्मासगँ जोड्न पनि नसकिने र छुट्याउन नसकिने खालको पनि छ । अधिंकाश नेपालीहरु भारतको राजनीतिक सत्ताको नेपालमाथिको हस्तक्षेपकारी गतिविधिको विपक्षमा छन् , तर सरकार कहिले पनि भारत प्रतिकुल बन्न सक्दैन । भर्खरै भएको भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जिको भ्रमणका क्रममा जनताकाहरुको प्रतिकृया सकारात्मक देखिएन ।
देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सारा युरोप अमेरीकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका अवसरमा डटेर विरोध गरका थिए नाकाबन्दीको सवालमा । अहिले मुखर्जीको भ्रमणको सन्दर्भमा जनजीवनमा परेको प्रभाव, सरकारले सार्वजनिकल विदा दिएको सवालले एउटा सार्वभौम राष्ट्रियता प्रतिकुल निर्णयको रुपमा जनताले ठूलो मात्रामा प्रतिकृया जनाए । मुखर्जिको भ्रमण सम्म आउदा पनि नेपाली जनता भारतप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको देखिएनन् । आखिर किन यस्तो भएको होला ? यसका कारणहरु को गहिराई के छ ? एक महत्वपूर्ण प्रश्न छ । जस मध्य हामीले केही सन्दर्भहरु उठाउने प्रयास गरेका छौं ।
ईष्ट ईन्डिया कम्पनीको शासनबाट मुक्त भए पछि भारतले सन् १९५० मा नेपालको सम्पूर्ण हिमालय भूखण्डलाई भारतको सिमाना बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखे पनि त्यो बेला सफल हुन सकेन भारतको आन्तरीक कारण र बाह्य परिस्थितिका कारण । उनीहरुले सोही बेलामा नेपाल, सिक्किम,र भुटानलाई कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका थिए । तर सरदार वल्लभ भाई पटेलको मृत्यु १५ डिसेम्बर १९५० मा भए पछि विशाल भूखण्डको कुरा अलि सेलाएको मात्र थियो । १९७५ मा गएर ईन्दीरा गान्धीले सिक्किम बिलय गराईन् ।
त्यस पछि क्रमिक रुपले नेपाल, र भुटानमा उसले आफ्ना नीतिमरु लाद्दै गयो । २००७ सालमा राणा विरोधी आन्दोलन चलिरहेका बेला राजा त्रिभुवनले भारतीय दुतावासमा शरण लिन पुगे । कार्तिक २१ गतेको त्यो घटनालाई प्रजातन्त्रवादी भनाउदाहरुले आन्दोलनसगँ जाडे पनि यो यो देश र राष्ट्रियताको प्रमुख समस्याको शुरुवातको प्रतीकका रुपमा स्थापित भयो । यो प्रकरणपछि नै भारतले खुलेआम नेपालको आन्तरीक राजनीतिमा हस्तक्षेपको मौका पायो । लेखक लियो रोजले भनेका छन् २००७ सालको संघर्षको निर्णायक लडाई दिल्लीका हलहरुमा लडिएको थियो न कि हिलहरु ( पहाड ) मा ।
त्यसबेला देखि नै भारत नेपालको आन्दोलनहरुको साक्षी मात्र होईन सहयात्री जस्तो बनाईयो । त्यसैको परिणाम स्वरुप सोही वर्ष भारतीय राजदुत चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंहको सिफारीसमा भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्री बनाईयो सामान्य लाग्ने यो घटना राष्ट्रियताको लागि घातक संकेत थियो । नेपालको आन्तरीक बैठकहरुमा भारतीय दुतहरु साक्षी बस्दथे ।
प्रकारान्तरले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि नेपालका दलहरुले भारतलाई औपचारीक निम्तो दिए हस्तक्षेपका लागि । भारतीय नेता चन्द्र शेखरले नेपालमा आएर राजतन्त्र विरुद्ध भाषण दिए । नाकाबन्दी गर्यो । आन्दोलनकारी दलहरु समर्थनमा रहे । तर जब ४६ सालमा आन्दोलन सकियो र प्रजातान्त्रिक सरकार बन्यो त्यस पछि के भयो ? त्यस पछि नेपालका धेरै नदी नालाहरु भारतलाई सुम्पने काम भयो । कोशी गण्डकी, महाकाली सबै त्यस पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले दिए र भारतको सहयोगमा सत्ता लम्व्याउने प्रयास गरे तर आज सम्म सफल कोही भएका छैनन् ।
त्यस पछि ५२ लामा थालिएको जनयुद्धको अवतरणमा पनि भारतको सक्रिय भूमिका देखियो । दिल्लीमा गएर १२ बुदे समझदारी हुनुको अर्थ त्यही थियो । जसको परिणाम आज नेपालको संविधान भारतले स्वीकार गरेको छैन । मधेशशमा आन्दोलन चर्काउदा समर्थन पुगोस भनेर नाकाबन्दी गर्यो । तर संविधान ससोधनको ठोस प्रारुप भारतले भने अनुसार नहुदा अझै पनि उसले चित्त बुझाएको छैन ।
काग्रेस माओवाद गठबन्धन र प्रचण्ड सरकारको निर्माण सविधान ससोधन गरी अगींकृत नागरीकलाई पनि राष्ट्रप्रमुख बनाउन पाउनु पर्ने, दुई नम्बर प्रदेशलाई केही आयातन बढाउनु पर्ने जुन कुरामा अडान राखिएको छ यो नेपालका मधेशवादी दलहरुको मुख्य आन्दोलनको एजेण्डा भए पनि कुटनीतिक या खुलेआम हस्तक्षेपको रुपमा भारतले दवावमा पारीरहेको छ ।
नेपाली नेताहरु किन डराउछन ?
एक जना विष्लेषकले ख्याल ठट्टामै भनेका थिए नेपालका नेताहरु दारु र भारुमा विके । यसलाई वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्न खोजिएको त हैन । तर सविधान र सरकारका सवालमा देखिएको गोप्य वार्ताहरु , चाकडीका लागि देखिएका अनेकौं प्रयासहरु हेर्दा उनीहरुमा केही त्रास छ । त्यसैले त यहा जनता र नेताबीच भिन्नता छ । उनीहरुले आन्दोलनमा सहयोग माग्ने देखि सरकारमा पुर्याउन सहयोग लिईरहेको पटक पटकका घटनाक्रमले स्पष्ट हुन्छ । तर जनता अभूतपूर्व छन् नेपालका । कुनै पनि तवरमा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरु निरन्तर भारतको हेपाहा प्रवृतिको विरोधमा व्यक्त भईरहेका छन् । मुखर्जीको भ्रमणका बेला सार्वजनिक विदा दिएर राष्ट्रिय बेईजती देखाएको यो सरकार पनि भारतको कुनै न कुनै खालको समर्थन र सहयोगमा सविधान कार्यन्वयन गरेर देखाउन चाहन्छ तर तब सम्म या हुने वाला छैन जब सम्म भारतीय ऐजेण्डाहरुले संविधानमा प्रवेश पाउने छैन । त्यसैले नेताहरुले ईतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्छ या त ईतिहासले दिने सजाय भोग्न तयार रहनु पर्दछ ।
सैन्य तथा आर्थिक चासो
सिंगो हिमालय क्षेत्रलाई सिमाना मान्ने पटेलको सपना पूरा त भएन तर नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा छातामा राख्न भारत चाहन्छ । कालापानी स्थित नेपाली भूमिमा अझै भारतीय सैनिक अखडा किन राखिएको छ ? बीरगञ्ज देखि विराटनगर सम्म भारतीय सैन्य सम्बद्ध कार्यलयहरु किन राखिएका छन् ?
यसले संकेत गर्दछ कि नेपालको सुरक्षा प्रवन्ध स्वतन्ध नहोस् भन्ने भारतको चाहना पूरानो हो । सन् १९६५ को गोप्य सन्धी अनुसार नेपालले हतियार भारतबाहेक अरु मुलुकबाट ल्याउन नपाउने ल्याए पनि अनुमति लिनु पर्ने भन्ने समझदारीले के संकेत गर्यो ?
आर्थिक रुपमा पनि नेपालले भारतको पूरै नियन्त्रणमा रहनु परेको छ । पञ्चेश्वर अपर कर्णाली जस्ता ठूला र दीर्घकालीक परियोजनाहरु ओगटेको भारतले अहिले सम्म नेपालको हितमा हुने कामलाई अवरुद्ध गर्ने तर आफ्नो हितमा हुने काम जस्तो शारदा बाध, दशगजाका सिचाई आयोजनाहरु तुरुन्तका तुरुन्त सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
भारतसगँ नेपालको व्यापार कुल वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा छ तर उसै सगै सबै भन्दा धेरै घाटा छ भने पछि नेपालको अर्थतन्त्र कसरी उभो लाग्छ ? अनि नेपालीहरु आफ्नो बारी झाडी बनाएर खाडीमा नगए कहा जाने ? उसले पेट्रोलीयम पदार्थ चीनबाट ल्याउन रोक्न गरेको प्रयास मात्र हेर्ने हो भने पनि र भित्री रुपमा चीनसगँको पारवहन सन्धिको विरोध गर्नुको आशय के थियो ? यसैले समग्रमा भारत नेपालमा सैनिक तथा आर्थिक चासोहरुलाई पनि निरन्तर आफ्नो अनुकुलतामा राख्न चाहन्छ ।
यही समष्टीगत कारणहरु छन् जसले गर्दा समग्र नेपाली दृष्टिकोण छिमेकी मुलुक भारतप्रति सकारात्मक हुन सकेको छै्रन । नेपाली मात्र हैन पाकिस्तानी, श्रीलकाली सहित धेरै छिमेकी र मित्र देशका जनताहरु भारतको कुदृष्टिको विरुद्धमा छन् र भारतले कहिले सम्म शैन्य तागतको आधारमा हेपिरहने काम गर्छ नेपाल सहितका छिमेकीलाई ? र कहिले सम्म जनताले सहन्छन् यो यति नै समय भनेर एकीन गर्न गाह्रो छ । तर समय यही रुपमा रहदैन यसले भिन्दै किसिमको अभ्यास गर्ने प्रष्ट देखिन्छ । नेतालाई भारत नभई नहुने जनतालाई भारत नचाहिने अवस्था कहिले सम्म ?